Shiinaha warshadda la tuuro ee Guedel Oropharyngeal Airway iyo alaab-qeybiyeyaasha. Biotek
Koodhka alaabta: BOT 127000
Codsiga: waxaa loo isticmaalay abuurista kanaalka marin-haweedka bukaanka inta lagu guda jiro suuxdinta iyo xaaladaha degdegga ah.
Cabirka: laga bilaabo 40mm ilaa 120mm.
Marinka marinka hawada ee afka ayaa loo adeegsadaa in lagu abuuro marin marin hawo ah oo udhaxeysa afka iyo gidaarka dambe ee xiiqda. Faa'iido leh marka carrabka iyo / ama epiglottis ay dib ugusoo horjeedaan cirridka dambe ee bukaanka suuxsan ama miyir la'aanta ah ee xannibaya qulqulka hawada.
Hawo mareenka siman oo jilicsan oo leh qaniinyo qaniinyo la xoojiyay;
2.Color wuxuu ku suntan yahay aqoonsi fudud;
3. Cabir buuxa oo la heli karo.
1. Marin haweedka loo yaqaan 'Oropharyngeal airway' waxaa laga sameeyaa heerka caafimaadka ee PE.
2. Waxay haysaa marinka gaaska ee marinka afka iyo dusha.
3. Araumatic geesaha jilicsan.
Naqshad samaynta qaab ahaan.
5.Waxaa diidaya inuu burburo.
Dusha sare iyo dusha sare.
7.Bite block wuxuu siiyaa marin u helida tuubbooyinka wax nuugaya.
8.Fududeyn si loo hubiyo ilaalinta ilkaha.
Baakadaha weyn ee nadiifka ah iyo kuwa nadiifka ah.
11. Waxaa lagu heli karaa shahaadooyinka CE, ISO.
Naqshad isku dhafan oo siman oo loogu talagalay raaxada bukaanka iyo nabadgelyada
Baakidhka qaniinyada midabkiisu yahay midabka leh waxaa loogu talagalay aqoonsi fudud iyo in laga hortago qaniinyada si looga hortago in la xannibo marin-haweedka
Qiyaaso kaladuwan oo buuxa
4.Waxaa lagu heli karaa iyada oo DEHP LACAG LA'AAN
000 # #
Wadada Diyaaradaha ee Guedel Oropharyngeal
Polyetylen aan sun ahayn
Midab Cod leh si loo ogaado cabirka
000 # -6 #
Bacda 1pc / fin
Hore: La tuuri karo 24 72 saacadood FR6 FR16 Kateetarka Nuugista xiran
Xiga: Tuurista Dhuunta Dhuunta Dhuunta ee Sanka lagu shubo